ဗီယကျနမျအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ဗီယက်နမ်ကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့်ကစားသမားများရရှိနိုင်ပါသည်ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
ပိုများသောမကြာသေးမီက, ဗီယက်နမ်ခရီးသွားဧည့်များ၏အာရုံကိုခံစားပျော်ရွှင်သောနိုင်ငံများအကြားမရှိ, ဤနေရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအဘယ်သူမျှမကျူးလွန်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့အခြေအနေကသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်လက်ရှိဗီယက်နမ်, ယင်း၏လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာစီးပွားရေးကိုအတူအားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသရုပ်ပြ, လူအပေါင်းတို့အားစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါဧည့်သည်များအကြားတိုင်းပြည်နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနှင့်၎င်း၏လှပမှုသိသိသာသာစိုက်ပျိုးထားပါတယ်လိုသူများအတွက်၏စီးဆင်းမှု, လောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေး၏ပရိသတ်များအများကြီးရှိပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်ဖြည့်စွက်အဘို့နှင့်ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းရောက်လာဘို့ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ၌ကြီးသောအားထုတ်မှုလုပ်နေပါတယ်။ ဒါဟာခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ဖဲချပ်ဝေယဉ်ကျေးမှု၏ဂိမ်းများကို၏ဆောက်လုပ်ရေးမှတဆင့်နောက်ထပ်တွန်းအားကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဒါဟာတိုင်းပြည်ဧည့်သည်များကဒီအာရှနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရမရကိုသာခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းလောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေးအဘို့ကြီးစွာသောအခမဲ့အချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒေသခံတွေအဘို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောဤနည်းကိုမရရှိနိုင်ရှိနေပါဦးမည်။
သို့သော် ကျနော်တို့ကဗီယက်နမ်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေပြီးပြည့်စုံသောအထီးကျန်မပွောနိုငျ ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစိုးရကတားမြစ်ချက်များသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကခွင့်ပြုခဲ့သည်နိုင်ငံသားများအွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံမှာကစားရန်။ ယခုအချိန်တွင်, ဒီနေဆဲတစ်ခုစမ်းသပ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကစားသမားအများအပြားအခုသူတို့ချက်ချင်း access ကိုရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လောလောဆယ်ဗီယက်နမ်အတွက်လိုင်စင်ခုနစ်လိုင်းအော်ပရေတာပေး၏။
ဆောင်ပုဒ်ဆက်လက်ကျနော်တို့မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာအကြီးစားမြေယာ-based လောင်းကစားရုံကုမ္ပဏီ MGM Resorts International ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်တိုင်းပြည်အတွက်ဖွင့်လှစ်ခံရဖို့သတိပြုပါ။ ဤရွေ့ကား, ဖန်ဆင်းခြင်း၏ဖန်ဆင်းရှင်ကနေဒါကုမ္ပဏီအာရှကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုအဲဒီမှာငြင်းပယ်ပါလိမ့်မည်ဗီယကျနမျဝင်ပေါက်စဉ်တွင်သာနိုင်ငံခြားဧည့်သည်များမှခွင့်ပြုခဲ့ပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာတောင်ပိုင်းဒေသများ, ဗီယက်နမ်၏ရှိရာအဓိကအပန်းဖြေဒေသများ၏တန်ခိုးကိုအထူးအာရုံစိုကျ, တိုင်းပြည်တစ်တက်ကြွတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိုက်ရှာနေသည်။ အသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများခရီးသွားဧည့်များအတွက်ဤအရပ်ဌာနကို၎င်းဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးစေဘို့တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေရေးရှိပါသည်။ ထိုအခါလောင်းကစားရုံသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလောင်းကစားတည်ထောင်သူတို့တွင်, လောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးများစွာသောပရိတ်သတ်တွေဧည့်သည်များ၏အရေအတွက်တိုးပေးနိုငျသောအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
တကယ်တော့, ဗီယက်နမ်အတွင်းပထမဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏အသွင်အပြင်တစ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ရပ်ခဲ့ , တဦးတည်းပင်, gimmick တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာပြောပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တိုင်းပြည်အတွင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖော်ပြခြင်းမအပေါင်းတို့, လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်း၏လုပျငနျးစဉျအတှငျးဒီဆုံးဖြတ်ချက်၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့်မှန်ကန်မှုသက်သေပြခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှဧည့်သည်ဒေတာစီးဆင်းမှုစာရင်းဇယားသိသိသာသာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား, ဧညျ့, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတို့နှင့်ကြီးသောကမ်းခြေနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းလောင်းကစားရုံ၏လုပျငနျးနှငျ့အတူမသာချိတ်ဆက်နေသည်။
ဗီယကျနမျအာဏာပိုင်များကအသစ်တဖန်ပြန်လည်ရန်မလိုပါ, ဒါပေမယ့်ပြီးသားတရုတ်ကျော်လွှားမူကြောင်းကိုကောင်းစွာ-နင်းလမ်းကြောင်းအပေါ်ဝင်ကြပြီ။ သဘောတူညီချက်များထို့နောက်လောင်းကစားရုံ, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခုလုံးကိုအခြေခံအဆောက်အအုံ (ဟိုတယ်, စျေးဝယ်စင်တာများ, စားသောက်ဆိုင်များ, ပြီးအများကြီးပို) သာစိုက်ထူထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှာတော့သူတို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ဒီဖြေရှင်းချက်, ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်, သာမှန်ကန်သော, ဒါပေမယ့်လည်းပညာရှိသပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်? တဦးတည်းလောင်းကစားရုံ turnkey run ဖို့ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုအပ်သည်။ နှင့်အိမ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာသေးထိုကဲ့သို့သောမြို့တော်မရှိပါ။ နှင့်လည်းကျွမ်းကျင်သူသင့်လျော်သောအဆင့်ကို။ ဟုတ်ပါတယ်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားစေခြင်းငှါ, ကျွန်တော်မြင်ရပါလိမ့်မည်ပြီးသားဒေသခံကုမ္ပဏီများကဖွင့်လှစ်မယ့်ကာစီနို, သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ယခုအချိန်တွင်အရာဖြစ်ကြ၏။
ခြောက်လခရီးသွားဒေသများယူဗီယက်နမ်လောင်းကစားသမားတွေဆန္ဒရှိယနေ့တွင်။ ဒါဟာဒီနံပါတ်ကိုယနေ့လည်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပန်းဖြေဖို့ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားရန်သာမဟုတ်ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအများအပြား၏နိုင်ငံသားများထံသို့လာကြ၏။ အခြားဘက်မှာဖောက်သည်များ၏အဆက်မပြတ်ကြီးမားစီးဆင်းမှုကြောင့်တရုတ်နယ်စပ်အနီးတည်ရှိသောအကြီးမားဆုံးဂိမ်းထူထောင်မှု၏တစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲ။
မြေအောက်လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုကိုအလွန်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေသည်ဟုပြောမှား၏။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသူတို့ကအတိအကျရာဇဝတ်မှုတစ်ခုတိုးလာသည်။ ပေမယ့်, သင်တန်း, အခွန်ကနေပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်အပိုတစ်ပြားမှဝေးပိုကနေပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အလုံခြုံဆုံး - ပစ္စုပ္ပန်မှာ, ဗီယက်နမ်အပေါငျးတို့သအာရှနိုင်ငံများ၏။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိတရားမဝင်ဂိမ်းကစားခန်းမဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြုအဖြစ်အခြေအနေကကုစားဖို့, အာဏာပိုင်များသည်၎င်း၏နိုင်ငံသားများအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာမကြာခင်မှာသူတို့ကမြေပြင်နှင့်လောင်းကစားသွားရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုခဲ့ပါလိမ့်မည်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤပြဿနာကိုတက်ကြွစွာအစိုးရစက်ဝိုင်းထဲမှာဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်, နှင့်ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ သို့သော်နိုင်ငံခြားသားများဗီယက်နမ်ဘို့ - သင်အနားယူနိုင်ပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းပိုက်ဆံအပေါ်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားရန်ရှိရာနေရာကောင်းတခု။
လောင်းကစားဝိုင်းမဆိုအောင်မြင်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြောင်းကိုအနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အော်ပရေတာများအတွက်သင့်လျော်သောအခြေအနေများ၏ဖန်တီးမှုမပါဘဲလမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောမရနိုင်ပါ။ ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုကောင်းစွာသတိပြုမိသည်, သို့မှသာပြည်နယ်များ၏အကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. မေ့ဘဲ, တတ်နိုင်သမျှဗီယက်နမ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်အဆင်ပြေပါစေကြိုးစားပါ။
အသစ်သောကုမ္ပဏီများသည်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့, ဥပဒေပြုရေးအဆင့်မှာ, အပြောင်းအလဲများကိုလောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အခွန်စုဆောင်းမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်သိသိသာသာလောင်းကစားရုံ (အထိ $3ဘီလီယံ) ၏ဖွင့်ပွဲများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်လိုအပ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အနည်းဆုံးပမာဏကိုလျှော့ချခဲ့သည်ဝင်ငွေများ၏% 35 မှလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်အခွန်အပေါ်အတိုးနှုန်းလျှော့ချ။
ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများအာဏာပိုင်များလောင်းကစားရုံအော်ပရေတာအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အခွန်နှင့်နိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ဦးစလုံးနီးပါးနှစ်ဆတက်ထိုကဲ့သို့သောပညတ်တိဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၏သင်တန်းယခုကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အပိုဆောင်းငွေအရင်းအနှီးမြှင့်ရန်, အညီ, အသစ်သောကာစီနိုလောင်းကစားရုံများဖွင့်လှစ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားများအလောင်းအစားလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပေမယ့်လစဉ်ဝင်ငွေအသက်အရွယ်နှင့်အဆင့်တွင်အချို့သောကန့်သတ်နှင့်အတူရှိသည်ဟုတရားလည်းရသည်။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဗီယက်နမ်, အပေါငျးတို့သစစ်ပွဲနှင့်အမေရိကတိုက်ကိုအောက်မေ့သောအခါဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘဲပုံပေါ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်သို့သော် imperceptibly, အချိန်ပျံသန်းသောနှစ်ပေါင်းလွန်နှင့်အာရှတိုင်းပြည်ပြီးသားမတိုင်မီကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူးခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဦးနောက်ပြန်လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင် မှစ. , ဗီယက်နမ်သူ၏စီးပွားရေးကိုအနားသတ်ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားလာသည်တစ်ဦးမျှမျှတတဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံသို့လှည့်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်က ပို. ပို. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကမိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားလှည်ဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဗီယက်နမ်တိုင်းပြည်သွားရောက်ရှာဖွေလျက်ခရီးသွားဧည့်နှင့်ပိုပြီးနှင့်ဤထူးခြားဆန်းပြားဒေသနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရဖို့ပိုဆန္ဒရှိများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဧည့်သည်များ၏စီးဆင်းမှုတိုးမြှင့်ဖို့သဘာဝဖြစ်ပါသည်, အာဏာပိုင်များလောင်းကစားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်, အမှတ်ဖို့, အများကြီးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အမှန်မှာထိုခရီးသွားဧည့်အကြားဝမ်းမြောက်စွာ "အပျော်အပါးတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း" ပေါင်းစပ်သောဖြစ်ပါသည်, နှင့်လှပသမိုင်းဆိုင်ရာသောနေရာများမှတဆင့်တစ်ဦးပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်ပျော်မွေ့နှင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းနှင့်အတူညနေပိုင်းတွင်ဖြုန်းမည်သူလောင်းကစားသမားတွေတွေ့ဆုံရန်သေချာပါသည်။ ဗီယက်နမ် tourismin လောင်းကစားတက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
လောင်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအမြဲကောင်းတစ်ဦးဝင်ငွေတတ်၏။ အာဏာပိုင်များတိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သူတို့အရှင်သည်ဒေသခံဘတ်ဂျက်မှသူ့ကိုယ်သူအခြား, ဝင်ငွေအတော်လေးအမြတ်အစွန်းပစ္စည်းများသည်။ သူတို့ကဗီယက်နမ်၏ကျန်နှင့်လောင်းကစားရုံများဆောက်လုပ်ခြင်းငွေသားစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သူမင်းအရာရှိ, ကှာခွားပါဘူး။ ကျနော်တို့ကတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကနေသိကြသည့်အတိုင်း, မည်သည့်အာရှထူးခြားဆန်းပြားတိုင်းပြည်တစ်လောင်းကစားရုံ၏ရှေ့မှောက်တွင်အမြဲချက်ချင်းပိုပိုပြီးခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်နှင့်ဘဏ္ဍာတိုက်မှအပိုဆောင်းဝင်ငွေ generate လုပ်နိုင်စွမ်း - ဒါကြောင့်ဟိုတယ်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးသော၏အကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့နံပါတ်နှင့်ဖဲချပ်ဂိမ်းလူကြိုက်များ၏အဖွင့်ခရီးသွားဧည့်ဗီယက်နမ်နှင့်အာဏာပိုင်များလာရောက်လည်ပတ်ရာမှအပြည့်အဝခံစားရရှိရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်ဖဲချပ်ဝေသို့မဟုတ်လောင်းကစားရုံကစားကစားရန်မယ့်ဒေသခံတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဗီယကျနမျအဆိုပါလောင်းကစားရုံမှာဆော့ကစားရန်အဘို့အပိတ်ပင်မှု၏စကားပြောသော, ငါတို့အတန်ငယ် palter ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကတကယ်လောင်းကစားရုံသွားရောက်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာ, ဒါပေမယ့်ကို virtual ကြသည်မဟုတ်။ မကွာလွန်ခဲ့တဲ့ဗီယကျနမျအာဏာပိုင်များစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကစားရန်ဒေသခံများမှခွင့်ပြုချက်ပေးတျောမူပါပွီ။ ကစားသမားစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ကြောင်းမြော်လင့်လျက်ပိတ်ပင်မှုကိုလုံးဝရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မည်, ထိုအခါသင်နှင့်ကြည့်ရှုလျက်, လောင်းကစားဝိုင်းခန်းမမှာအသုံးပြုနိုင်ကြမည်။ ဒီတော့ဝေး, တူညီတဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားခုနစ်အော်ပရေတာများ၏ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းအရာဖြစ်ရပါမည်။
မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်များအတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Resorts အင်တာနေရှင်နယ်, အ MGM ပိုင်ဆိုင်တံ့သောကြီးတစ်ခုလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ စီမံကိန်းနှင့်ဤရှုပ်ထွေးသော၏ဆောက်လုပ်ရေးဖန်တီးရန်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်ကနေဒါကုမ္ပဏီအာရှကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားရေးသားခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်း, အဲဒါကို access ကိုခေတ်မီနည်းပညာနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာ၏အံ့ဖွယ်သာနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဖွင့်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဗီယက်နမ် access ကိုငြင်းဆိုသည်။
ဗီယက်နမ်မပါဘဲအမေရိကန်-ဗီယက်နမ်ပဋိပက္ခ၏သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတနှင့်အမှတ်အသားများကနေခရီးသွားဧည့်မှပြသနိုင်ဖို့တစ်ခုခုကိုရှိပါတယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့ပြည်နယ်၏တောင်ပိုင်းဒေသများရှိဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်အလှဆုံးအပန်းဖြေစခန်း, အဲဒီနောက်ခရီးသွားဧည့်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အာဏာပိုင်များအဖြစ်ကောင်းစွာယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏နိုင်ငံတွင်းရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဆိုပြုချက်များနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအမျိုးမျိုးယူဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တစ်ခုလုံးကိုပူးတွဲအခြေခံအဆောက်အအုံဖို့ကန့်သတ်မဟုတျပါ, ဒါပေမယ့်လည်းလောင်းကစားရုံများဆောက်လုပ်ခြင်းကိုအထူးအာရုံစိုက်။ ကြွင်းသောအရာမှလာမယ့်ပြီးနောက်လူတွေအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးကြိုးစားရန်လိုခငျြနှင့်ပင်သောသူတို့သည်တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းခန်းမမရောက်ဖူးခဲ့သူအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အဆိုပါလောင်းကစားရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သွေးဆောင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ တကယ်ဘယ်နေရာမှာမဆို, အချိန်မရွေးကစားရန်အဆင်သင့်လောင်းကစားဝိုင်းကစားသမားအကြောင်းပြောဆိုရန်အဘယ်အရာကိုမျှဘယ်အရာကိုပါပဲ။
တိုင်းပြည်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများဖွင့်လှစ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခုနှစ်တွင်ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များဟာအလွန်မှန်ကန်တဲ့နှင့်စဉ်းစားဟန်ပြောင်းရွှေ့စေပြီ။ လောင်းကစားဝိုင်းတင်းကြပ်စွာအတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာတားမြစ်ထားခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဆက်ဆက်တစ်ဦး "အစဉ်အလာ" တိုင်းပြည်အတွက်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့နှင့်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားဧည့်များ၏ရောက်လာစာရင်းဇယားအရသိရသည်သိသိသာသာတိုးတကျခဲ့သောကြောင့်, ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအပြုသဘောရလဒ်ယူဆောင်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အားလုံးဟိုတယ်အတွက်နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုသည်ကမ်းခြေနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသဘာဝတရား၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှသလောက်ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်ကြောင်းသတိပညာဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ သို့သော်ဗီယက်နမ်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများပေါ်ပေါက်ရေးသိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍကစားခဲ့သည်။
အခြားအာရှနိုင်ငံများ၏အတွေ့အကြုံ, ဥပမာတရုတ်နိုင်ငံတွင်အတူတူမွေးစား, ဗီယကျနမျအာဏာပိုင်များအလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီ။ ထိုသို့သောအားဖြင့်ဘတ်ဂျက်မှငွေသားစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်, တိုင်းပြည်ရန် ပို. ပို. ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လိုကောင်းတစ်ခုဥပမာပြီးသားရှိလျှင်အဘယ်ကြောင့်အသစ်နှင့်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုတီထွင်? ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အဆောက်အဦများနှင့်လောင်းကစားရုံန်ဆောင်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဗီယက်နမ်ပေမယ်လောင်းကစားရုံသူ့ဟာသူ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူမသာကိုကူညီနိုင်မကြီးမားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီများကအများကြီး၏ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ဒါပေမယ့်လည်းအားလုံးကကပ်လျက်, ဒါကြောင့်လိုအပ်သော ခရီးသွားဧည့်အခြေခံအဆောက်အအုံအဘို့, ဆိုလိုသည်မှာ, ဟိုတယ်များ, စျေးဝယ်စင်တာများ, ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်, အဖျော်ယမကာနှင့်ဒါပေါ်မှာ။ ဒီကုမ္ပဏီအတွက်အနာဂတ်တွင်ကန်ထရိုက်တာဗီယက်နမ်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၎င်း၏ရှယ်ယာပိုင်ခွင့်ပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ပြီးသားရေးသားခဲ့သည်အမျှနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများ၏ဖန်တီးမှုအတွက်အထူးကု, ဗီယက်နမ်မဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်လည်းသင်တန်း၏ပိုက်ဆံ, ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဝေး-မြော်အမြင်သောမင်းတို့နှင့်နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးဆုံးဖြတ်ချက်ယူပါ။ သူကတောင်လိုအပ်ငွေဘယ်လောက်စိတ်ကူးနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့ဟိုတယ်, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ရေကူးကန်များ, Spa မ်ား, စားသောက်ဆိုင်နှင့်အခြားအမှုအရာနှင့်တကွ, အနည်းဆုံးဖျော်ဖြေရေးစင်တာဖွင့်လှစ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ဤသာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသည်အစဉ်အမြဲနိုင်ငံအတွင်းထိုကဲ့သို့အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်စေ့စပ်မည်မဆိုလိုပါ။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, အာဏာပိုင်များ ပို. ပင်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်၏မွေးစားသွားပါလိမ့်မယ်သင်ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက် "လှည့်ကွက်" လိုအပ်သမျှနှင့်အတူဒေသခံများလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကဤမျှလောက်မြန်မြန်ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်,
ယခုပင်လျှင်ယနေ့ခရီးသွားဧည့်, ဧည့်သည်များလက်ခံရရှိရန်အပြည့်အဝအဆင်သင့်မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့် operating, ခြောက်လခရီးသွားဧည့်မယားများနေကြသည်။ သူတို့ကခရီးသွားဧည့်မသာကြွင်း, ရှိသမျှအရသာများနှင့်အလိုဆန္ဒများအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းလောင်းကစားရုံသွားရောက်လည်ပတ်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုခံစားဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ ထိုအခါကစားသမားများနှင့်ဖွင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကြွင်းသောအရာမှတစ်ဦးအတော်လေးစျေးပေါလိုသောပြီးသားဗီယက်နမ်သို့သွားရောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ထို့အပြင်အကြီးဆုံးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလောင်းကစားရုံအချို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အနီးတွင်တည်ရှိသည်။ ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခုအနေဖြင့်ကစားသမားများနှင့်ချမ်းသာသောဗီယက်နမ်တွင်ဤထူထောင်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့မြောက်မြားစွာဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်။
ရှည်လျားလူသိများခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း, တားမြစ်ထားအသီးသည်ချို၏။ ဒါကဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလောင်းကစားရဲ့အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်အပေါငျးတို့သတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုများနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ၏ကြားမှအတွက်တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံပမာဏကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖြစ်ကြသည်။
တိုင်းပြည်အတွင်းတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းများအလုံအလောက်သူတို့ကဤအဖွဲ့အစည်းများရာဇဝတ်ကောင်များနှင့်သူခိုးများအတွက်မွေးမြူရေးခိုင်ခိုင်လုံလုံကြောင့်ထိခိုက်မှု, ခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်, တိုင်းပြည်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အဖြစ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မဟုတ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဗီယက်နမ်တရားမဝင်လောင်းကစားအတိုင်းအတာတိုက်ဖျက်ဖို့တာနှင့်အတော်လေးအောင်မြင်စွာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ယခုအချိန်တွင်, ဗီယက်နမ်အလုံခြုံဆုံးခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာကိုစဉ်းစားသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထံမှစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တရားမဝင်လောင်းကစားခြင်းမှဝင်ငွေဒေသခံဘတ်ဂျက်၏ replenishment အထောက်အကူပြုအနည်းငယ်သာရှိသည်, ဥပမာ, တူညီတဲ့လူမှုရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဗီယက်နမ်မှလျော့နည်းအာဏာပိုင်များ, မြေအောက်လောင်းကစားရုံသွားရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံ၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံခွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စကိုမကြာခင်ဒေသခံတွေအဘို့အလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုအပြည့်အဝရုတ်သိမ်းရောက်ရှိလိမ့်မည်သူတို့မိတ်ဆွေများကဝိုင်းရံပုဂိမ်းစားပွဲ၌ညနေခင်းဖြုန်း, ပုံမှန်လောင်းကစားရုံများတွင်သူတို့၏ "အသွေးတော်" ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ပဲ။ အာဏာပိုင်များသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. အလွန်လေးနက်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတောင်သူ့ရဲ့အထူးထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ ဒါဝေးကိုသာနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သင်တန်း၏, ထိုလောင်းကစားရုံအတွက်ဂိမ်းအကြား, ခမ်းနားဟိုတယ်များတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးသောနေရာများသို့သွားရောက်ခြင်း, ဤခမ်းနားသောနေရာများသို့သွားရောက်ကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။
လူတိုင်းရိုးရှင်းစွာစုံတွဲတစ်တွဲကိုပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာများတယ်ဖိတ်ခေါ်နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီးဝင်ငွေ generate ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လုံလောက်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထဲမှာမအောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်သိတယ်။ ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များဒီတော့အကောင့်သို့အလားအလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများ၏အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုလုံးကို ယူ. , စီးပွားရေးအကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြလိမ့်မည်တဲ့ဥပဒေပြုမူဘောင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ရန်, ကြွင်းသောအရာထက် သာ. ကောင်း၏ကနားလည်ပါတယ်။
ဒီအခြေစိုက်စခန်း၏တံခါးသော့ကိုမှတ်တစ်ခုမှာလောင်းကစားဝိုင်း၏အခွန်ကောက်ခံမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်ခုတိုးပွားလာတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းရှုပ်ထွေးသောဖွင့်လှစ်ခွင့်များအတွက်နိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သုံးဒေါ်လာဘီလျံလျှော့ချခဲ့သည်, နှင့်အခွန်အပေါ်အတိုးနှုန်းကနေဝင်ငွေသုံးဆငါးရာခိုင်နှုန်းအထိ "ဖြတ်" လောင်းကစားဝိုင်း။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အစီအမံသာတိုးမြှင့်လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှု၏အော်ပရေတာများအကြားပြုလုပ်ယှဉ်ပြိုင်မှုသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ကျင်းပနံပါတ်များအားဖြင့်စီရင်တော်အခွန်နီးပါးထက်ဝက်ကျဆင်းသွားနိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ ဤရွေ့ကားတီထွင်မှုကိုအခြားနိုင်ငံများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်နှင့်ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ငွေကြေးပိုမိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်ဟုသူတို့တပ်မှာရှိတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏နံပါတ်တစ်လျင်မြန်စွာတိုးကိုမျှော်လင့်။ ဥပဒေပြုလောင်းကစားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်တွင်ပင်ထပ်မံ သွား. အချို့သောဒေသခံများကထားပြီးလောင်းကစားခန်းမသို့သွားရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ သို့သော်အချို့န့်အသတ်ကို "ပုပိုက်ဆံအိတ်၏အထူ" ပေါ်တွင်နှင့်ကစားသမားများ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ရှိပါတယ်။